Somali / Wargalin ku saabsan Waxbarshada fasalka dhexdiisa ee loogu talagalay PreK-12 (In-Person Lea
Qoysaska Sharafta leh ee Iskoolada Cherry Creek,
Macluumaadka iyo hagida cusub ee ku saabsan COVID-19 ee soo baxa, waxaan rabaa inaan idinla wadaago qorshaheena cusub ee ku saabsan bilowga iskoolka ee bisha August. Waxaan ku faraxsanahay inaan ardayda u fidino waxbarasho shan maalmood oo fasalka dhexdiisa ah usbuuciiba ardayda PreK-12 Taa ka sokow, fursada doorashada barashada internetka ee qoys kasta oo aan rabin inay ubadkooda u diraan dugsiga xaga caafimaadka awgeed iyo sababa kale. Maalinta ugu horeysa ee iskoolka la furayo waxey noqon doontaa August 17keeda.
Maadaama aan la hubin sida ay xaaladu u ekaan doonto dhamaadka xagaaga, waxaan sii wadi doonaa diyaarinta xulashooyinka waxbarasho ee kaladuwan si aan diyaar ugu noqono bilow fiicaan oo guul leh sanad dugsiyeedkan soo socda, sikastaba arintu ha noqotee.
Sidii had iyo jeerba, hadafkeenu waa inaanu ku laabano waxbarashada qofka ah ee fasalka dhexdiisa dhamaan ardayda sida ugu badan ee ugu macquulsan, anagoo fiirineyna dhamaan taxadarada lagama maarmaanka ah si loo hubiyo caafimaadka iyo amniga ardayda iyo shaqaalaha. Todobaadkan, wadajir dhamaan hay'adaha caafimaad ee maxalliga ah yaa soo saaray hagis wargalin ah dib-u-furista iskoolada xiliga deyrta-fallka. Tilmaanta hore yaa laga leexiyay si adagna culeyska loo saaray kala-fogaanshaha 6 cagood waxaana la soo jeediyay talooyin taxane ah oo cusub oo diiradda saaraya isku dhawaanshaha kooxaha ardayda, si weyn hoos u dhigista is dhaxgalka ardayda (waqtiyada is-araga, sanduuqyada,lookarada iwm.), Iyo xirashada maaskarada sida ugu badan ee suuragalka ah.
"Carruurta Colorado waxay u baahan yihiin inay ku noqdaan dugsiyadooda, waana ku faraxsanahay inaan siinno hagis-cadeyn iyo war-bixin leh oo kormeerayaasha iskooladeena iyo gobolada si ay u taageeraan dadaalkooda ku aadan dib-u-furitaanka dugsiga si nabadgelyo ah," warbixinta oo ka dhaxeysa Iskaashiga Metro Denver ee Caafimaadka. “Ku dhawaad 9 milyan oo kiisas oo ah COVID-19 ee adduunka oo dhan, dhowr arimood ama xaaladood oo quseeya dib-u-furista dugsiyada yaa bilaabanaya inay soo baxaan. Marka hore, caruurtu waxay u muuqdaan inay leeyihiin heerar hoose oo ah infakshanka fayraska marka loo fiiriyo dadka waayeelka ah, markii uu caabuqu dhaco ama fido, caruurtu waxay aad ugu badantahay in aysan soo garin dhibaatooyin ba'an marka loo eego dadka waaweyn. Marka labaad, halka carruurta (oo ay ku jiraan kuwa aan muujin astaamaha) ay gudbin karaan COVID-19, cadaymo soo ifbaxaya ayaa sheegaya in carruurtu aysan ahayn kuwa koowaad ee gudbiya xanuunka taas oo samayn ku yeelan doonta dib u furitaanka dugsiga ma daama ay gudbintu aad ugu yartahay ardayda iyo ardayda iyo shaqaalaha.”
Angoo tix raacayna hagida, waxaan u fidinaynaa fursadaha barashada shaqsi ahaaneed ee fasalada dhexdiisa oo dhan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qorshaheenna barashada fasalka dhexdiisa shan maalmood usbuucii dhamaan fasalada oo dhan ayaa laga heli karaa halkan qorshaha mustaqbalka 2020-21 website. . Waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad aqrisaan doorashada xulashooyinkiina ka hor intaadan saxiixin Foomamka Waalidka si aad u dhamaystirto diiwaangelinta, kaasoo la furay todobaadkan ama usbuucan.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan la shaqeyno khubarada caafimaadka bulshada iyo howl wadeenada Qorsheynta ee CCSD - oo ka kooban barayaal, waalidiinta iyo hogaamiyaasha degmada - si aan u qorsheyno qorshayaal faahfaahsan oo mudnaanta koowaad siinaya waxbarashada iyo caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena gaaraysa ilaa 55,000 iyo 9,000 oo shaqaale ah.
Hal arin baa la hubaa sanad dugsiyeedka soo socda: Iskooladu sidii hore ma ahaan doonaan, laakiin waan rajeyneynaa inay fiicnaan doonto.
Waxaa jiri doona baaris caafimaad oo dhamaan ardayda iyo shaqaalaha lagu samayn doono markay imaanayaan iskoolka, iyo waji oo la xirto yaa looga baahan doonaa gudaha iskoolka sida ugu macquulsan. Jadwalka fasalada ayaa la isku hagaajin doonaa si loo maareeyo ardayda isla markaana loo xadido dhaqdhaqaaqa ardayda maalinta oo dhan. Ma jiri doonaan kulano ama isu imaatino waaweyn. Ardayda ma isticmaali doonaan sahayda la wadaago. Dugsiyadu waxay lahaan doonaan saabuun, gacmo nadiifiye si loogu ogolaado in gacmaha la dhaqo mar kasta, iyo fasallada, basaska iyo xarumaha dugsiga si joogto ah yaa jeermiska looga nadiifin doonaa.
Waxaan rabaa inaan carrabka ku adkeeyo muhiimadda ay leedahay talaabooyinkan caafimaad. Hadii aan raacno nidaamkaas oo dadka waaweyn iyo ardaydu ay xirtaan maaskaro ama afka, waxaan heli doonaa fursad weyn oo aan ku ilaalino caafimaadka oo aan iska ilaalino xirista iskoolada mudada dheer cudurka dartiis. Ka raadi oo fiiri fiidiyowyo aladaha warbaahinta bulshada ee dugsiga todobaadyada soo socda kuwaas oo ku tusi doona tusaalooyin ku saabsan sida uu sanad dugsiyeedka soo socda u ekaan doono oo siin doona fikrado loogu talagalay oo ka caawin doona carruurta sidd ay si habsami leh ugu noqon lahaayeen dugsiyada.
Waxaan kaloo rabaa inaan xoogaa daqiiqad ah uga mahadnaqo macllimiinteena cajiibka ah, maamulayaasha, shaqaalaha dugsiga iyo waalidiinta galiyey waqti badan inay ka jawaabaan dhibaatadan caafimaad iyo u diyaarinta sanad dugsiyeed cusub oo sharfaya himilooyinkeena sinaanta oo siinaya dhamaan ardayda fursad ay wax ku bartaan ,koraan, iyo ku barbaaraan. Waxaa I sii dhiirrigeliya geesinimadiina, ficiladiina naxariista leh, adkeysigiina iyo go'aamintiina ay bulshadeenu muujisay.
Dhamaanteen waxaan ku wada jirnaa arintan waana ka soo bixi doonaa tartankan. Waxaan I rajeynayaa xagaa-summer fiican oo aamin ah oo farxad leh.